Jadwalka Tareenka Bosphorus Express oo dib loo bilaabay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraJadwalka Tareenka Bosphorus Express
07 / 12 / 2019 06 Ankara, 34 Istanbul, Gobolka Central Anatolia, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, Ankara iyo Arifiye (Sakarya) inta udhaxeysa tareenada xawaaraha dheereeya (YHT) ma joojinayaan saldhigyada gadiidka si ay u buuxiyaan baahida loo qabo gaadiidka ka baxa Bosphorus Express ayaa mar kale bilaaban doona berri.
Turhan, maadaama ay tahay wasaaradda muwaadiniinta in ay si taxaddar leh ula socoto dhammaan noocyada baahiyaha safarka ee aan ahayn uun YHT'ler, Khadadka caadiga ayaa sidoo kale adeegyo cusub ka bilaabay tareenno cusub, ayuu yidhi.
Turhan wuxuu cadeeyay in agaasinka guud ee TCDD Transportation Inc. uu balaariyay adeeggeeda iyo tayadiisa maalin kasta oo dhaafaysa iyo in Lakes Express ay soo galeen adeeg bishii Oktoobar iyo in dadka naafada ah lasiin doono kahor Maalinta Naafada Aduunka.
Turhan, tii ugu horreysay ee loo yaqaan '' YHT'nin 2009'dan 'tan iyo markii la soo bandhigay 52,4 milyan oo rakaab ah waxay wateen macluumaad, iyo sidoo kale tareenadan, khadadka waaweyn iyo tareennada gobollada ee ka shaqeeya khadadka caadiga ah, iyagoo u adeegaya tiro aad u badan oo rakaab ah oo la soo sheegay.
Turhan wuxuu carrabka ku adkeeyay inay isku dayayaan inay noloshooda ka dhigaan mid fudud iyagoo fulinaya shuruudaha gaadiidka ee muwaadiniinta inta ay suuragal tahay.
Wasiirka Turhan, "Ankara iyo Arifiye (Sakarya) inta udhaxeysa saldhigyada kuwaas oo buuxin doona baahida gaadiidka ee udhaxeysa hay'adda 'YHT'lerin Bosphorus Express', 8 Diseembar (berri) ayaa bilaabi doonta duulimaadyada.
Safarku wuxuu qaadan doonaa ku dhawaad ​​6 saacadood
Turhan wuxuu kaloo siiyey macluumaad ku saabsan safarada Bosphorus Express iyo waqtiga safarka wuxuuna yidhi:
Boğaz Iyadoo Bosphorus Express la shaqeynayo inta lagu jiro maalinta, safarka safarku wuxuu noqon doonaa ugu yaraan saacadaha 6. Tareenka ayaa ka tagi doona Ankara 08.15 wuxuuna imaan doonaa Arifiye 14.27. Tareenka, oo ka tagi doona Arifiye ee 15.30, wuxuu ku gaari doonaa Ankara 21.34. Bosphorus Express oo leh awooda rakaabka ee 240 ayaa ka koobnaan doonta gawaarida tababarka 4. Awoodda rakaabka ayaa la kordhin doonaa haddii ay jirto baahi weyn oo loo qabo muujinta, oo dejin doonta oo kala degi doonta rakaabyada xarunta weyn iyo kuwa yar ee 16 iyo rugta ay ku yaalliin meesha loo yaqaan 'YHTs'.
Turhan wuxuu sheegay in marka ugu horreysa ee Axadda ay ka bilaaban doonaan Ankara, "Safarka masaafada ugu fog ee Bosphorus Express, oo bixin doona safar raaxo leh oo raaxo leh, ayaa loo go'aamiyay inuu yahay 55 lira."
Taariikhda Bosphorus Express
Shirkadda 'Bosphorus Express' waxay ahayd khadka tareenka ugu weyn ee ay maamusho TCDD inta u dhaxaysa Istanbul iyo Ankara. 2012-2014 wuxuu kashaqeynayay inta udhaxeysa Arifiye iyo Eskişehir. Tareenka 24 ayaa la joojiyay Julay 2014 waxaana lagu beddelay tareennada loo yaqaan 'YHT'.
In kasta oo ay lahayd magac furan, waxay u adeegtay xarumo badan oo maxalli ah oo u dhexeeya Arifiye iyo Ankara waxayna caan ku ahayd ardayda sababta oo ah qiimo jaban.
Bosphorus Express, 1 Bishii Juun 1968, Istanbul waxay adeegyadeeda ka bilowdey Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa iyo Saldhigga Tareenka ee Ankara oo ku yaal magaalada Ankara iyada oo leh taarikada cusub ee CIWL, oo ​​ka mid ah tareennada hormuudka u ah TCDD. Qiimaha tigidhada kaliya wuxuu ahaa 32 lira iyo tikidhada safarka wareega wuxuu ahaa 56 lira. Gawaarida tareenka waa naaftada iyo wadada xNUMX km ee ka tagta Istanbul ilaa Arifiye waxaa lagu tijaabiyey 1977.
4 Bishii Janaayo 1979, tareen ay leedahay Ekspres ayaa isku dhacay tareen ka mid ah Anatolian Express oo u dhow Esenkent waxaana ladilay dadka 19 waxaana ku dhaawacmay dad 124 ah.
Bishii Disember Markii dhammaan tareennada Istanbul-Ankara laga xalliyo 1993, waxay u beddeleen tareennada korantada ee Boğaziçi Ekspres. Tareenkii ugu horreeyay ee korantada qaada ayaa soo jiiday E40002, 26 1993 Diseembar 08: 00 wuxuu tagay Haydarpaşa. TCDD waxay sidoo kale tareenka ku qalabeysay wadiiqooyin cusub oo TVS2000 ah, kuwaas oo loo dhisay in lagu wanaajiyo sawirka tareenka. Adeegga xadidan ee tareenka ayaa is beddelay dhawr sano ka dib oo joogsaday inta badan saldhigyada, isagoo noqonaya mid ka mid ah tareennada magaalada ku shaqeeya ee u dhexeeya Istanbul iyo Ankara.
Bosphorus Express, 25 Bishii Agoosto 2004, duullimaadyada waxaa joojiyay TCDD iyada oo ku saleysan adeegsiga hooseeya, laakiin sababtoo ah kororka baahida adeegyada bulshada, 27 ayaa dib u bilaabay howlihii Sebtember. Markii la furay wadada tareenka xawaaraha-dheer ee Ankara-Eskişehir bishii Maarso 2009, tareeno badan oo ka howlgala inta u dhaxeysa Istanbul iyo Ankara ayaa ku laabtay Eskişehir. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay ugu wacan tahay shaqooyinka dhismaha ee xawaaraha xawaaraha sare ee u dhexeeya Gebze iyo Sapanca, Bosphorus Express wuxuu sii waday safarkiisa labada magaalo illaa Febraayo 131 iyada oo 1 km masaafo gaaban u jirto Istanbul ilaa Arifiye. Laba bilood ka dib, bishii Abriil, tareenka 2012 ayaa dib u gaabiyey mar labaad, markan Ankara sababtuna tahay dhismaha wadada tareenka ee Başkentray. Iyada oo la furayo furitaanka Istanbul-Eskişehir ee wadada tareenka xawaaraha sare ee Istanbul-Ankara, Bosphorus Express wuxuu u adeegsaday inta u dhaxaysa Arifiye iyo Eskişehir (2 km) laba sano oo dheeri ah ilaa 24 laga joojiyay bishii Luulyo 2014.
Duullimaadyada Bosphorus Express